MUUQAAL: Madaxwayne Farmaajo oo Ka yaabsaday Shacabka Xeebta Liido iyo Go’aankiisa Midnimada Soomaliya | Entertainment and News Site
Home » bulshada » MUUQAAL: Madaxwayne Farmaajo oo Ka yaabsaday Shacabka Xeebta Liido iyo Go’aankiisa Midnimada Soomaliya
MUUQAAL: Madaxwayne Farmaajo oo Ka yaabsaday Shacabka Xeebta Liido iyo Go’aankiisa Midnimada Soomaliya
daajis.com:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa galabta lagu arkay Xeebta Liido, halkaasoo kormeer lama filaan ah ku tagay, iyadoo markii u horeysay ay heyd oo uu Madaxweynaha tago goobaha dadka isugu yimaadaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka qaxweeyay mid ka mid ah maqaayadaha ku yaala Xeebta Liido, halkaasoo uu kula sheekeystay dadkii fadhiyay, Sidoo kale wuxuu lugeeyay xeebta, waxaa uu la sheekeystay dhalinyaro xeebta ku damaashaadayay, kuwa kubad ku ciyaarayay, waxaana dadka qaar ay su’aalo weydiiyaan.
Madaxweynaha ayaa la kaftamayay dhalinyaro kubad ciyaareysay, isagoo ka yaabsaday dhalinyaradii kubadda ciyaareysay, Wuxuuna horay u soo noqday Garsoore kubadda cagta ah, waxaana uu dhalinyarada tusay inuu kubadda si wanaagsan u yaqaano.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA MD. FARMAAJO
Intaasi kadib Madaxwaynaha ayaa Shacabka Su’aalo ka dhegaystay, Wuxuuna siwayn uga hadlay Midnimada Soomaaliya, Isagoona ku baaqay inay Siyaasiyiintu Tanaasul sameeyaan, Shacabkuna uu mid yahay.